Moya Inkonzo-iSuzhou Springchem International Co., Ltd.
Iqela elityebileyo linamava eqela elinolwazi lweemveliso zobuchwephesha, libonelela ngeyona nkonzo ilungileyo emva kokuthengisa, ephumelela ukudunyiswa ngumthengi.
Uthungelwano lwethu lweentengiso lubandakanya ilizwe laseTshayina, eMzantsi Melika, kulo lonke elaseAsia, eAfrika, kuMbindi Mpuma, njl.Iimveliso ezibonelelwa yinkampani yethu zisetyenziswa kakhulu kwiinkalo ezininzi.
Ndifuna ngokwenene ukusebenzisana nani, Kuba besisoloko sisebenza phantsi komgaqo wokuncedana kunye nokuhlonelana ngokhetho lomnye.
Yile nto ndiyithandayo ngawe!ngalo lonke ixesha ndibona ukuba uzabalazela ukwenza ngcono - kukho umnqweno omkhulu wenkqubela-phambili kuwe - umoya omkhulu wokufumana into - ndiyathanda ukuba ndiyasithanda eso simo sengqondo ngokunyanisekileyo.
Uphakathi kwabantu abambalwa endikwaziyo ukuthetha ngokukhululekileyo kwaye ndisebenze ngokulula ngombulelo!- Ndicinga ukuba ngamanye amaxesha ndiba nomsindo kwaye ndicaphuke - kodwa undilawula kakuhle kwaye uhoye yonke into - ulunge kakhulu !!nyani-andikhange ndidibane nomnye umntu onjengawe kulo lonke elaseChina nasekorea ndixelela wonke umntu ukuba umhlobo wam u-Iris eTshayina ngoyena mntu ulungileyo endakha ndadibana naye-unobubele, unyanisekile kwaye unomsebenzi-ndikuthanda kakhulu ngaloo nto.
Iqela lethu lokuthengisa liqulathe iingcali ezinamava aqinileyo kushishino.Njengeqabane eliqalayo, sibonelela kakhulu ngaphezu kweemveliso zexabiso eliphezulu.
Siyakuxhasa ukujongana nemiceli mngeni emininzi kwaye sikunika izisombululo ezilungiselelwe wena.Ezi zidityaniswe nobukho bethu obuqinileyo kwintengiso, zikunika ukufikelela kwiimveliso zamva nje kunye nobuchwepheshe.
Sinobudlelwane bentsebenziswano bexesha elide nozinzo kunye nabathumeli bempahla abaqeqeshiweyo kunye neenkampani zokuthumela ngenqanawa, kwaye isebe lethu lothutho lobuchwephesha liya kulungelelanisa umzi-mveliso ukuhambisa iimpahla ngexesha, ukupakisha ngokufanelekileyo, kunye ne-inshurensi kuzo zonke iingozi.Okokugqibela, sizama ukuhambisa iimpahla kubathengi ngexesha kwaye ngokukhuselekileyo.